नीट–नेपाललाई आधिकारिकता दिँइदैन
प्रकाशित मिति: 2015/10/09
राजेन्द्र बजगाइँ सदस्य –पर्यटन विभाग, नेपाली कांग्रेस
राजेन्द्र बजगाइँ नेपाली कांग्रेस पर्यटन विभागका सदस्य तथा कांग्रेसकै एक प्रभावशाली व्यक्तित्वको रुपमा चिनिनुहुन्छ । ट्रेकिङ एजन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान)को पूर्वमहासचिवसमेत रहनुभएका बजगाइँ दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि पर्यटन क्षेत्रमा आबद्ध हुनुहुन्छ । टानको आसन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय पर्यटन व्यवसायी संघ (नीट –नेपाल) ले नेपाल पर्यटन व्यवसायी मञ्चसँग सहकार्य गर्ने औपचारिक निर्णय गरेसँगै बजगाइँ रुष्ट बन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस समर्थित नीटले एमाओवादीसम्बद्ध मञ्चसँग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने भन्दै एकल टिम घोषणा गरेर आफ्नै नेतृत्वमा अगाडि बढनुपर्ने कुरा कडा रुपमा राख्दै आउनुभएका बजगाइँले निट नेपालको पछिल्लो निर्णयबारे के भन्नुहुन्छ ? र अब कसरी अघि बढ्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? यिनै विषयवस्तुहरुको सेरोफेरोमा रहेर गन्तव्य नेपाल संवाददाता सुवास भट्टले गरेको कुराकानीः
नीट–मञ्च गठबन्धनबाट सागर पाण्डेकै नेतृत्वमा चुनावी टिम सार्वजनिक गरिएको छ, तर तपाईं सुरुदेखि नै यो गठबन्धनको विपक्षमा उभिँदै आउनुभएको छ, अब के गर्नुहुन्छ ?
व्यक्ति सागर पाण्डे गौण हो । यसलाई म त्यत्ति महत्व दिन चाहन्न । मूल कुरा नीति हो । सागर पाण्डेलाई उठाउन सहमति र सहकार्यको वातावरण जो पात्रहरुले बनाए, तिनीहरुप्रति मेरो आपत्ति हो । एमाओवादीको प्रतिनिधिलाई नेपाली कांग्रेसले बोक्नुपर्ने आधार के ? पहिलो कुरा त कांग्रेसले एमाओवादीलाई बोक्नुपर्ने कुनै सैद्धान्तिक राजनीतिक धरातल नै छैन । दोस्रो पक्ष भनेको व्यवसायमा उहाँहरुको प्रतिनिधित्वको कुरा छ । फरक विचार राख्ने पार्टीका व्यावसायिक प्रतिनिधिहरुले भोट ‘कास्ट’ गर्नुपर्ने कारण म केही देख्दिनँ, यहाँ संख्या पनि मिल्दैन । झण्डै तीन सय प्रतिशत बढी भोट संख्या भएको एउटा विचार राख्ने व्यावसायिक जमातले न्यून भोट संख्या भएका अर्को विचार राख्ने समूहलाई प्रस्ताव राख्नुपर्ने कारण नै रहस्यमय छ ।
कांग्रेस–एमाओवादी मिलेर अगाडि बढ्नै नहुने भन्ने पनि त हुन्न होला नि ?
मुख्य कुरा त नेपालमा विखण्डनवादीहरु, विध्वंसकारीहरुले खुलाबजार अर्थनीतिलाई अवलम्बन गर्न सक्दैनन् । स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी व्यापारको वातावरण बनाउन सक्दैनन् । त्यस्तै, टानको आगामी कार्यसमितिमा जसलाई प्रस्ताव र अंगीकार गरिएको छ, सानो संख्यामा, सानो एकाइको व्यापार गरे पनि ती व्यक्तिहरुले अनैतिक र असामयिक व्यवसायहरु सञ्चालन गरेका छन् । उनीहरुसँग मिलेर अगाडि बढ्ने कुरा सम्भव छैन ।
टानको वर्तमान कार्यसमिति आउनुपूर्व आगामी नेतृत्व एमाओवादीलाई दिनेगरी एक प्रकारको भद्र सहमति भएको थियो । यसको आधारमा एमाओवादीलाई नेतृत्व दिन किन मिल्दैन ?
पहिलो संविधानसभाको चुनावपछाडि एमाओवादीले आफूहरु मुलुकको ठूलो पार्टी भएको दाबी गरिरहँदा तर दोस्रो संविधानसभाको चुनावी परिणाम नआउँदासम्म यो कुरालाई केही हदसम्म मान्न सकिन्छ । दोस्रो संविधानसभाभन्दा अगाडि टानको निर्वाचन भएको थियो । तत्कालीन अवस्थामा माओवादी समर्थित व्यवसायीहरुको संख्या एक सय ४० को हाराहारीमा थियो । टानको निर्वाचन भइसकेपछि र दोस्रो संविधानसभा सम्पन्न भइसकेपछि एमाओवादी न्यून मतसंख्याका साथ तेस्रोमा झरेको अवस्था हो । यो मात्र होइन पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै माओवादी तीन चिरामा विभाजित देखियो । तसर्थ, त्यही एक सय ४० मत पनि विभाजित भएर जाँदा निर्वाचनपूर्व भएको भद्र सहमतिको पुष्टि गर्न सकिन्न ।
अघिल्लो टान निर्वाचनमा ठूलो दल हुनुको बाबजुद पनि एमाओवादीले कांग्रेसलाई नेतृत्वमा उदारता देखायो, अहिले त्यस्तै उदारता कांग्रेसले देखाउँदा के फरक पर्छ ?
यसका लागि एमाओवादीको भोट संख्या नै मिल्दैन । त्यसो भए निर्वाचन नै नगरे पनि भइहाल्यो नि ! सहमति गरेर दिए भयो नि एमाओवादीलाई ! के एमाओवादीभन्दा अरु छैनन् ? हामी तीन सयभन्दा बढी रहेको ठूलो जमातले न्यून संख्याको प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मान्न सक्दैनौँ ।
नेकपा एमालेलाई नेतृत्व दिनेगरी सहमतीय आधारमा जान मिल्छ कि मिल्दैन ?
कदापि मिल्दैन । हामीले एमालेलाई नेतृत्व सुम्पिने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हो । सहमतीय आधारमा जाने भनेको त सोहीखालको वातावरण बनेको खण्डमा हो, यस सम्बन्धमा छलफल नै भएको छैन । यहाँ सबैजना चुनावमा जान खोजिरहेका छन् ।
टानको आसन्न निर्वाचनमा कुनै पनि हालतमा कांग्रेसकै नेतृत्वमा जानुपर्छ भन्ने तपाइँको निष्कर्ष हो ?
हो । यसबाहेक नेपाली कांग्रेस खुला बजार अर्थनीति मान्छ । युनियनवाद हामी मान्दैनौँ । हामी व्यवसायमैत्री छौँ, तसर्थ व्यवसायमा सहजीकरण गर्छौँ । हाम्रो इतिहासले यो कुरालाई प्रष्ट बताउँछ । यस हिसाबले पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा जानुपर्छ ।
नीट–नेपाल र तपाइँबीचको असमझदारी के हो ?
कांग्रेस समर्थित पर्यटन व्यवसायीहरुको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनको हिसाबले हामीले नीट–नेपाल खडा गरेका हौँ । हामीले नीटको तदर्थ समिति गठन गर्दा फुर्सद भएका, पार्टीको कुनै जिम्मेवारी नलिएका तथा मूलधारमा काम नगरेका स्वतन्त्र तर कांगे्रस समर्थक दीपक महतलाई हामीले प्रस्तुत गरेका हौँ । तर पार्टीलाई ‘क्रस’ गरेर उहाँबाट यति ठूलो बेइमानी, घृणित कार्य हुन्छ भन्ने सोचेका पनि थिएनौँ । हामीले संगठन खोलेकै नेपाली कांग्रेस समर्थित व्यवसायीहरुलाई एकत्रित गर्नका लागि हो । हामीले स्वतन्त्र छोडेको उहाँबाट धोका हुन्न भन्ने हामीलाई लागेको थियो । तर यसविपरीत उहाँले सारा गैरकांग्रेसीहरुलाई नीटभित्र आमन्त्रित गर्नुृभयो ।
यस्तो हुनुको कारणचाहिँ के होला ?
यो उहाँको ‘भेष्टेड इन्ट्रेस्ट’ (निहित स्वार्थ) हो । यो प्रश्न उहाँलाई नै सोध्नुपर्छ । उहाँको कुनै लोभ वा स्वार्थ छ, यसमा गाइड गर्ने देबेन्द्र वाग्ले हुनुहुन्छ । म सम्पूर्ण नीटलाई भन्दिनँ, देवेन्द्र वाग्ले, दीपक महत र रमेश धमलाको कारणले यी सम्पूर्ण कुराहरु भइरहेका छन् । अहिले पार्टीको केन्द्रीय विभागले उहाँहरुको क्रियाकलापमा विभाग जिम्मेवार नभएको भन्न बाध्य भएको छ ।
त्यसो भए नीट नेपाल अब कांग्रेससमर्थित नभएको पुष्टि भयो हैन त ?
नीटले कांग्रेसको लागि कामै गरेको छैन । उसले कांग्रेसविरोधी काम गर्दै हिँडेको छ । नीट एनजीओमात्र हो, कांग्रेस होइन ।
तपाइँ नेपाली कांग्रेस पर्यटन विभाग सदस्य हुनुहुन्छ, विभागले आफैँअन्तर्गतको संगठनको गतिविधिबारे बेलैमा सचेत गराउन किन सकेन ?
नीट–नेपाल एनजीओमा दर्ता भएको हो । तथापि, हाम्रो चाहना के थियो भने नीट कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्था होस् । तर, सारा ठाउँहरुबाट गैरकांग्रेसहरु छिराएपछि अहिले यसलाई शुभेच्छुक संस्था भन्न नसकिने अवस्था आएको छ । सिडिओ कार्यालयमा दर्ता भएको र कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको मान्यता ग्रहण गरिनसकेका कारण नीटलाई हामीले परिपत्र गर्न सक्दैनौँ ।
नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट गर्न सकिने कारबाही केही गर्न सकिने अवस्था छ कि छैन ?
नीटले कांग्रेसको शुभेच्छुक संस्थाको रुपमा आधिकारिकता पाएकै छैन भने हामीले त्यस्तो केही गर्न सक्दैनौँ, पार्टीका तर्फबाट । बरु, नेपाली कांग्रेसको पर्यटन केन्द्रीय विभागले पर्यटनसँग सम्बन्धित छुट्टै फोरमहरु खोल्दै छ । नीटलाई हामीले आधिकारिकता दिएकै छैनौँ, दिँदैनौ पनि । पार्टीको आधिकारिक संस्था होइन भन्नुले नै त्यो कुरालाई पुष्टि गरिहाल्छ नि ।
पर्यटन व्यवसायको हितको खातिर पार्टीको अंकुश मान्दैनौँ भन्ने नीटको धारणा हो कि ?
यो गलत हो । किनकि विगतमा देखिनुपर्‍यो नि ! विगतमा टानमा हुँदा मैले गरेका काम र उहाँहरुको समयमा भएका कामहरु हेर्नुस् न ! उहाँहरुले के काम गर्नुभो । समीक्षा गर्नुस् न ! मैले गौरीशंकर नेशनल पार्क पास गराएँ । फ्रेन्चहरुको भिसा रोकिँदा टानको तत्कालीन महासचिवको हैसियतले चाईनिज राजदूतावाससँग सहकार्य गरेर कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा समस्या समाधान गरेँ । कालापत्थरमा क्याविनेट मिटिङ गरेँ । कोपनहेगन मार्चपास गराएँ । पदयात्री सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टीम्स) लागू गराएँ । टानमा हुँदा मैले ल्याएका स्रोतहरु प्रयोग गर्नका लागि पछि हानाथाप भयो ।
उहाँहरुले के काम गर्नुभएको छ ? खोइ एजेण्डा ? दुई वर्षमा आज के भयो ? अब केका लागि मत हाल्ने ? यो दुई वर्षको अवधिमा चुनाव जित्ने भनियो, जहाँ जहाँ गयो त्यहाँ विनाशमात्र भयो । पर्यटन बोर्ड उहाँहरुको आन्दोलनले गर्दा ‘डिस्ट्रक्सन’ भयो । पर्यटन बोर्डको आजको हालत के छ भने बोर्डका सिईओलगायतका सारा कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा परे, यो ठीक छ । तर, बाँकी काम के भयो भन्दा बोर्ड एमालेको कब्जामा गयो, कांग्रेस र एमाओवादी त तहसनहसै भयो नि ! एजेण्डा हुनुपर्‍यो, गरेको कामको भरोसा हुनुपर्‍यो । तब पो हुन्छ ।
यही स्थितिले त कांग्रेस पनि विभाजित देखियो । पर्यटनमा कांग्रेसलाई अब कसरी बुझ्ने ?
कांग्रेस विभाजन भएको छैन । कांग्रेसका मुकुण्डोधारीहरु पार्टीलाई धोका दिएर एमाओवादीको शरणमा गएका हुन् ।